Izikhokelo ezine zokuFunda iWebhu yeWebhu | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 19, 2010 NgeCawa, uJuni 28, 2015 Umthetho oyilwayo wesiNgesi
Ukufunda sisikhundla umntu anokufunda kuso isicatshulwa kwaye aqonde kwaye akhumbule oko akufundileyo. Nazi ezinye iingcebiso zokuphucula ukufundeka, ukubonisa, kunye nokubonisa okubhaliweyo kwakho kwiwebhu.
1. Bhala iWebhu
Ukufunda kwiwebhu akukho lula. Abahloli beekhompyuter banesisombululo esisezantsi sescreen, kwaye ukukhanya kwabo okucingelweyo ngokukhawuleza kwenza amehlo ethu adinwe. Kwaye iiwebhusayithi ezininzi kunye nezicelo zakhiwa ngabantu abangenalo uqeqesho olusemthethweni kubugcisa bokuchwetheza okanye uyilo lwegraphic.
Nazi izikhombisi onokuthi uziqwalasele ngexesha lenkqubo yokubhala:
Umsebenzisi ophakathi uya kufunda ebuninzini 28% yamagama kwiphepha lewebhu, ke yenza amagama owasebenzisayo ukubala. Isikhokelo esiphakamisa ukuba abathengi bethu kwiTuitive kukusika ikopi yakho ngesiqingatha, emva koko uyinqumle kwakhona. Siyazi ukuba le nto yenza ukuba uTolstoy wakho akhale ngaphakathi, kodwa abafundi bakho bayakuxabisa.
Sebenzisa ulwimi olucacileyo, oluthe ngqo noluthethayo.
Gwema "imarike", isicatshulwa esiqhayisayo esizalisa iintengiso ezimbi ("Imveliso entsha eshushu!"). Endaweni yoko, nika ulwazi oluluncedo nolungqalileyo.
Gcina iziqendu ezimfutshane, kwaye uzinciphise kwingcamango enye kumhlathi ngamnye.
Sebenzisa uluhlu lweebhulethi
Sebenzisa indlela yokubhala eguqulweyo, ukugcina olona lwazi lubalulekileyo phezulu.
Cwangcisa umxholo wakho Ngezihloko ezisezantsi
Iintloko ezingaphantsi zibaluleke kakhulu ekuvumela umsebenzisi ukuba asasaze iphepha lomxholo ngokubonakalayo. Bahlulahlula iphepha libe ngamacandelo alawulwayo kwaye baxele ukuba icandelo ngalinye lingantoni. Oku kubalulekile kumsebenzisi oskena iphepha elizama ukufumana eyona nto ibaluleke kakhulu.
Iintloko ezingaphantsi zikwadala ukuhamba okubonwayo okuvumela abasebenzisi ukuba bahambise amehlo abo ezantsi kuwo wonke umxholo.
Zama ukukhawulelana nomzimba ophambili wephepha lakho lewebhu (ngaphandle kokuhamba, i-footer, njl.njl.) Kubukhulu obuthathu: isihloko sephepha, i-sub-header, kunye nekopi yomzimba. Yenza umahluko phakathi kwezi zitayile ucace kwaye usebenze. Umahluko omncinci kakhulu kubukhulu kunye nobunzima uya kwenza ukuba izinto zingqubane endaweni yokusebenza kunye.
Xa ubhala, qiniseka ukuba izihloko ezingaphantsi ziyayidibanisa inqaku lesicatshulwa abasimele kumagama ambalwa, kwaye ungacingi ukuba umsebenzisi ulifunde ngokupheleleyo eli candelo lingentla okanye ngezantsi. Phepha ulwimi oluhle ngokugqithisileyo okanye olunobuqhetseba; Ukucaca kubalulekile. Iintloko ezingaphantsi ezinentsingiselo kunye eziluncedo ziya kugcina umfundi ezibandakanya kwaye zibameme ukuba baqhubeke nokufunda.
3. Nxibelelana Nombhalo oFomathiweyo
EziqhelekileyoI-italics inokusetyenziselwa ukugxininisa, kwaye unike izivakalisi zakho ithoni yokuthetha ngokubonisa ukunyusa ilizwi. Umzekelo, ibinzana elithi "Ndikuxelele ukuba ndibone monkey”Inentsingiselo eyahlukileyo kunokuthi“ Mna xelelwe wena ndabona inkawu ”.
Zonke iiCaps: Abantu bafunda ngokwenza imilo yamagama endaweni yokubala amagama unobumba ngonobumba. Ngesi sizathu okubhaliweyo kuzo ZONKE i-CAPS kunzima kakhulu ukuba kufundwe kuba kuphazamisa ukumila kwamagama esiqhele ukuwabona. Kunqande ukuyisebenzisa kwiindinyana ezide zombhalo okanye izivakalisi ezipheleleyo.
Bold: Isibindi sinokwenza ukuba iinxalenye zesicatshulwa sakho zivelele, kodwa zama ukungasisebenzisi kakubi. Ukuba unebhloko enkulu yokubhaliweyo efuna ukugxininiswa, zama ukusebenzisa umbala ongasemva endaweni yoko.
4. Isithuba esibi sinokuba ngu-Oh-So-Positive
Inani elifanelekileyo lesithuba phakathi kwemigca yokubhaliweyo, phakathi koonobumba, naphakathi kweebhloko zekopi linokuphucula kakhulu isantya sokufunda kunye nokuqonda. Esi sithuba esimhlophe (okanye "esibi") esivumela abantu ukuba bahlule unobumba omnye kwelelandelayo, nxulumana neebhloko zokubhaliweyo kunye nokugcina umkhondo wendawo abakuyo kwiphepha.
Njengoko ujonge iphepha, tywina kwaye ufiphale amehlo ade isicatshulwa sibe yinto engenakufikelelwa. Ngaba iphepha lahlula ngokucocekileyo libe ngamacandelo? Ngaba unokwazi ukuba yintoni umxholo wecandelo ngalinye? Ukuba akunjalo, kuya kufuneka uphinde uyile uyilo lwakho.
Bafunda kancinane kangakanani abaSebenzisi? nguJakob Nielsen
Uzibhala njani izihlokwana ezigqibeleleyo Ngu-Brian Clark
Imigaqo eli-10 yokuFunda ngokuChwetheza kwiWebhu NguMat Cronin
tags: UkuThengiswa kweMpahlaukufundekaiyafundeka
Ababoneleli ngeNkonzo ye-imeyile bayitsibile i-Shark
NgoJulayi 5, 2011 ngo-10:17 PM
Umxholo omkhulu apha! Amaxesha amaninzi xa kuthethwe kakuhle kubhetele ngakumbi, ngakumbi, kuthethwe kakubi. Enye yeencwadi endizithandayo yethi “Don’t Make Me Think”. ngenxa yezizathu ezifanayo ezichazwe apha.